IPixelmator Pro 2.0 ikwafumana uloliwe weApple Silicon | Ndisuka mac
IPixelmator Pro 2.0 ikwafumana uloliwe weApple Silicon
Ewe akekho umphuhlisi ozihloniphayo oza kushiyeka ngaphandle kokukhwela kuloliwe omtsha weSantya esiphezulu obizwa I-Apple Silicon. Ukuba uhlala uhlela imifanekiso, awunasizathu sokungathengi enye yeeMacs ezintsha kunye neprosesa ye-M1.
Ubudlelwane sele buhlaziyiwe kwi-Apple Silicon, iPixelmator siyayibona loo nto, kwaye neFotohop isendleleni (sichazelwe yona UCraig Federighi Kwigama eliphambili leWWDC), ke ukuba uzinikezela kwi-retouching yeefoto, isoftware ayizukulahleka.
Iqela lePixelmator, umphuhlisi wesicelo segama elifanayo, usandula ukubhengeza ukuba kwiveki ezayo (nge-19 kaNovemba) izokwazisa inguqulelo yayo entsha yePixelmator Pro 2.0 ehlengahlengiswe kwi-MacOS Big Sur kwaye iphinde yahlengahlengiswa ukuze isebenze ngqo kwiprosesa entsha ye-Apple M1.
IPixelmator Pro 2.0 ifaka ujongano lomsebenzisi oluhlaziyiweyo kunye nebar esecaleni yomda kunye nolungiselelo lwebar yesixhobo, kubandakanya umkhangeli weziphumo ezinamandla. Kukho ukhetho olwandisiweyo lokwenza ngokwezifiso ujongano olutsha. Le nguqulo intsha ilungiselelwe iMacOS Big Sur kunye neeMacBooks ezintsha kunye neMac mini Apple Silicon enobuchwephesha be-ARM.
Le nguqulo intsha yazisa umxholo wokusetwa kwendawo yokusebenzela enokukhawuleza ihlengahlengise ujongano lomsebenzisi kuwo nawuphi na umsebenzi owenzayo. Ukuseta kwangaphambili okwakhelwe ngaphakathi kubandakanya ubume beepaneli ezilungiselelwe ukuhamba komsebenzi. ukufota, uyilo, umzekeliso kunye nokupeyinta.
Thatha ithuba lenjini ye-M1 ye-neural
Kwaye njengoko benditshilo ngaphambili, ikhowudi yakho ibhalwe ngokutsha ukuze iqhubeke ngqo kwiprosesa ye-M1, ngaphandle kwesidingo seRosetta. Ukongeza ekusebenziseni i-CPU enamandla kunye ne-GPU yeprosesa entsha, iziphumo zokufunda komatshini wePixelmator kunye noseto ziya kuthatha ithuba Imoto ye-neural ye-M1 yokusebenza okuphezulu nangaphezulu.
Umphuhlisi uthi amanqaku e-Core ML kwiPixelmator Pro afikelela kumaxesha alishumi elinesihlanu ngokukhawuleza xa eqhuba kwi-chip ye-M1 kunenguqulo eqhuba kwiiprosesa. Intel. IPixelmator yentsimbi esekwe kwindalo ekwindawo ethetha ngayo ikwathetha ukuba kufuneka sibone izibonelelo ezinkulu kuyilo olumanyeneyo lweM1.
IPixelmator Pro 2.0 entsha iya kufumaneka njenge Ukuhlaziywa simahla kubasebenzisi abasele bengabanini bayo ukusuka nge-19 kaNovemba, kwaye iya kuthengiswa ngexabiso layo eliqhelekileyo le-43,99 yee-Euro zabasebenzisi abatsha. Njengamaxesha onke, unokukhuphela iPixelmator Pro kwi-Mac Ivenkile yosetyenziso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Ezinye iiNkqubo zeMac » IPixelmator Pro 2.0 ikwafumana uloliwe weApple Silicon
Ukucoceka kweMyMac X kwi-MacOS Big Sur
Isicelo seGreenroom seMacOS sihlaziywa ukuze siziqhelanise noyilo olutsha lweMacOS Big Sur